कतारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रायमाझीलाई भब्य स्वागत, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कतारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रायमाझीलाई भब्य स्वागत
कतार । कतारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व उप–प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भब्य गरिएको छ।
अर्घाखाँची सेवा समाज कतारले भ्रमणको क्रममा कतार आएका पुर्व उपप्रधानमन्त्री राजमाझीलाई भब्यताका साथ स्वागत गरेको हो।
अर्घाखाँची सेवा समाज कतारका अध्यक्ष ठाकुर कुमार परियारको अध्यक्षतामा बसेको भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रायमाझीलाई रहेका थिए।
कार्यक्रममा पुर्व महासचिव बिष्णु प्रसाद भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजका अध्यक्ष देब परियार, मजदुर अभियान कर्ता बिबि खरेल, एनआरएन कतारका सह कोषाध्यक्ष मामा यसीन, परियार मित्रता समाजका प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला बासी तथा गैर जिल्लाबासीहरु उल्लेखनीय उपस्थित रहेको थियो भने उपस्थितिहरुले खादा ओढाएर उहाँलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। साथै उपस्थिति सम्पुर्णले परिचय दिनु भएको थियो ।कार्यक्रममा उपस्थिति सम्पुर्णलाई संस्थाका प्रथम उपाध्याय केदार नाथ भुसालले स्वागत गरेका थिए।
रोजगारीको सिलसिला कतारमा आएका प्रवासी नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि अर्घाखाँची सेवा समाजले योगदान पुर्याएको पूर्व मन्त्री रायमाझीले बताए।
प्राकृतिक विपद्ले समस्यामा परेका प्रबासी नेपालीहरुलाई उद्दार गरी स्वदेश फिर्ता पठाउने गरेकोप्रति पूर्व मन्त्रीले अर्घाखाँची सेवा समाजलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए।
उक्त समाजले अर्घाखाँची जिल्लामा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेको अर्घाखाँची सेवा समाज कतारका अध्यक्ष ठाकुर कुमार परियारले बताए।
मुस्लिम समाजको निमन्त्रणामा आफू आएको र अर्घाखाँची सेवा समाजसँग भेटघाट हुदा पाउँदा खूशी भएको पूर्व मन्त्री रायमाझीले बताए।
नेता रायमाझीले भने, ‘गत वर्ष युएईमा गएको र त्यहाँको दर्दानाक समस्या रहेको थियो। त्यसपछि राजदुतसँग बसेर आफ्नो देशको नागरिकको सुरक्षामा लाग्न कुराकानी गरेको उनले बताए।’